गित गाएर सबैलाई रुवाईन् मेनुकाले, पहिलो उपहार ट्याब मोबाइल ! कसले पुरा गरि देलान् सपना ? (हेर्नुस् भिडियो)
सुरिलो स्वरकी धनि मेनुका परियार आमालाई सम्झेर गीत गाउँदा गाउदै भक्कानिएर रोएकी छिन् । धादिंङकी मेनुका परियार निकै मिठो गीत गाउँछिन् । आधुनिक देखि लोक गीत पनि गाउन सक्ने क्षमता भएकी मेनुकाको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ ।
सानै छदादेखि नै आमाको माया नपाएकी मेनुकालाई अहिले उनकी दिदी हरुले आमा बनेर पालनपोषण गरिरहेका छन् । आमाको मानसिक अवस्था कमजोर भएपछि उनले आमाको माया पाईनन् । आमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन उनलाई । केही दिन अघि हामीमाझ आफुसँग मोवाईल, टिभी केही पनि नभएको बताएकी मेनुकालाई ट्याब उपहार आएको छ ।
भबिष्यमा चर्चित गायिका बन्ने सोच राखेकी मेनुकालाई आज सहयोगी दाता राजेन्द्र मिश्रले उपहार स्वरूप ट्याब दिएका छन् । उनलाई उपहार सँगसँगै राजेन्द्रले मेनुकाको उज्ज्वल भबिष्यको कामना गरेका छन् । उनको हर इच्छा र सपना पुरा होस्, हाम्रो पनि उनलाई उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना छ ।
परिस्थिति सामान्य बन्दै गएपछि यो संख्या क्रमशः बढाइने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । ठूलो माग र दवाव आएको छ, संख्या बढाउन, तर परिस्थिति हेरेर मात्र यसमा अर्को निर्णय हुन्छ, उनले भने । नेपालमा १० चैतबाट सबै प्रकारका व्यवसायिक उडान बन्द छन् ।